Ilungele isemina yeGvSIG-iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Ukulungelelwa kwi seminar ye-GvSIG
Ukulungelelwa kwi seminar ye-GvSIG
Ekugqibeleni, isikhungo Ndithethile Kwagqitywa yiGvSIG, njengokuba benze isiphakamiso sokuphuhlisa inkqubo yoLawulo loLwazi loMasipala elaphuhliswe kwiJava phantsi kwe-APV ye-GvSIG.
Ngoko ndiza kukunika i-seminar yeentsuku ze-3 iintsuku ezintathu phantsi kwegama:
"Indlela yokwenza ngayo iGvSIG into endiyenzayo ngeArcView", Ndiya kukwahlula ngamanyathelo amathathu:
Ngoku ngoku ndinabantwana abathandathu abachazwe ngaphambili, i-2 kubo abaphuhlisi beJava, ababini baphatha i-ArcGIS nabo bonke abasebenzisi beArcView 3x yakudala.
Iprojekthi abayiyilileyo ibandakanya ukuphuhliswa kwesicelo sokusetyenziswa koosodolophu, incwadi yomsebenzisi noqeqesho koomasipala abalingwayo aba-5. Emva kwexesha, kulindeleke ukuba amava abe nakho ukuhlengahlengiswa kwaye iziko lemanyano loomasipala linokuwaphindaphinda kwabanye oomasipala.
Iworkshop yokuqala iya kuba ekupheleni kwe-Oktobha kunye nezinye ezimbini ngoNovemba, kunye neveki yokuhlukana.
Ndiya kukuxelela apho.
I-Bentley iya kunika i-Geo seminars eSpain